Git Sangit News » प्रतितोला ७५ हजारमा झर्दै सुनको भाउ, यस्तो छ ह्वात्तै घट्नुको कारण !
प्रतितोला ७५ हजारमा झर्दै सुनको भाउ, यस्तो छ ह्वात्तै घट्नुको कारण !
काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लागेको खण्डमा तोलाको १ लाख रुपैयाँ नाघेको सुनको मूल्य ७५ हजार हाराहारीमा झर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण कारोबार बन्द भएको बजारमा मूल्य घट्ने अनुमानले अत्याधिक सुन किनेर राखेका व्यवसायी चिन्तामा छन् भने सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने देखिएको छ ।
लकडाउन खुला भएपनि फेरी कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि भदौ ४ गतेदेखि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण नेपाली सुन बजार बन्द छ ।
कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा धेरै समय सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाएर तोलाको १ लाख रुपैयाँ नै नाघ्न पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २ हजार डलर नाघ्यो । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि सुनमा लगानी गर्ने बढ्दा अन्तर्राष्ट्रियसँगै नेपाली बजार प्रभावित भएको हो ।
कोभिडका कारण सुन व्यवसाय मात्र होइन, मानिसको जीवनयापन नै कष्टकर बनेको छ । तत्कालको प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ ।
यस्तो अवस्थामा गरगहना लगाउने कुरा दोस्रो विषय बनेको छ । सबै क्षेत्र ठप्प बन्दा मानिसको आम्दानी घट्न गएको छ । आम्दानी नै नभएपछि सुन लगाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउनुहुन्छ ।
यतिबेला सुन आयात पनि कम भएको छ । यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न भ्याक्सिनको खोजी गरिरहेका छन् । यदि कोभिड १९ को भ्याक्सिन आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्वभाविकरुपमा बढेको सुनको मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको शाक्यले बताउनुभयो । खोप पत्ता लागेमा मूल्य घटेर ७५ देखि ८५ हजारको हाराहारी (रेन्ज)मा बस्ने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर १ हजार ५ सय देखि १ हजार ७ सय डलर हाराहारीमा झर्ने अनुमान छ । यसअघि मूल्य बढ्ने हल्लाले बैंकबाट किलोका किलो सुन किन्ने व्यवसायीहरु पनि मूल्य घट्ने अनुमानसँगै पछिल्लो समय चिन्तित देखिएका छन् । -जनतासमाचारबाट
प्रकाशित मिति ११ भाद्र २०७७, बिहीबार १५:४४